Ngokungafaniyo nommandla we-Geospatial apho izicelo zoMthombo oVulekileyo zisebenza ngaphezu kwabanikazi, siye sabona isoftware encinci yasimahla yeCAD ngaphandle kwenyathelo le-LibreCAD, elisenendlela ende ekufuneka ihambe. Nangona iBlender isisisixhobo…
Eli lithuba ekungekho mntu kufuneka aliphose. Okwethutyana, kude kube sekupheleni kukaSeptemba 2011, iCADLEarning ibonelele ngekhuphoni yokufikelela onokuthi ngayo ufake zonke izixhobo ezifumanekayo iintsuku ezisi-7. I-CADLearning yi...
Ngubani ongafuni ikhosi ye-AutoCAD ye-intanethi yamahhala ... Ngokufutshane, akukho nto ifana nokuthatha ikhosi esemthethweni kunye nomqeqeshi omhle wokufunda i-AutoCAD. Kodwa inketho endiza kuyibonisa indishiye ndimangalisiwe, xa ndicinga...
Emva kweminyaka ephantse ibe yi-30 yezi nkqubo zimbini, ezithi ngendlela ebonakala ngathi ziphakathi kwabambalwa abasindayo kwimbali ende yendaleko, ndiye ndathatha ixesha lokuqwalasela umbandela ukubonisa ezinye zeembali...
Kuqhelekile ukufumana isidingo sokuguqula inani elikhulu leefayile ngendlela enkulu: Sifumana iprojekthi kunye neefayile ze-dwg ze-45 kwifomethi ye-AutoCAD 20112. Siyazi ukuba ezi fayile zinokufundwa kwi-AutoCAD 2010 kunye ne-2011 kodwa ukuba...
Ekugqibeleni, kwaye njengoko kubhengezwe kulo mhla, i-AutoDesk inike lonke ulwazi malunga nento entsha kwi-AutoCAD 2012. Ngendlela efanayo, oko kuthetha ntoni kwamanye amacandelo, ngaphandle kwe-AutoCAD ye-Mac, ...
Sineentsuku ezimbalwa ukusuka ekuboneni isaziso sokuqala sokuba i-AutoCAD 2012 izisa kwakhona, iprojekthi eyenziwe njenge-Iron-man. Ngaphambi kokuba oko kwenzeke, bendiphonononga uqikelelo lwam ukusukela ekuqaleni konyaka kwaye ndithelekisa nokuvuza oku…
Le ntwasahlobo siza kubona inguqu entsha ye-AutoCAD 2012, ezinye iindaba zisenza sibonakale ngathi sele sisondele kakhulu. Asiyazi ininzi into ebesinokuyilindela, ngaphandle kwale nto ithethwa luluntu lwase-Anglo-Saxon, kunye neyam…
Ukufunda i-AutoCAD ayisesosizathu kula maxesha onxibelelwano. Ngoku kuyenzeka ukuba ufumane iincwadana ezinevidiyo simahla kwi-intanethi. Olu khetho endikubonisa lona mhlawumbi yeyona ndlela ilungileyo yokufunda i-AutoCAD ngokulula.…
Molweni bahlobo bam, iipati, iirokethi, iinacatamales kunye ne-hugs yonyaka omtsha zidlulile. Kuhle ukubuyela kweli cala lobomi, kunyaka olungileyo weendaba. I-AutoCAD ivela kwiminyaka emi-3 yokunika…